शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन के गर्ने ? यस्ता छन् उपाय..... - Health Today Nepal
शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन के गर्ने ? यस्ता छन् उपाय…..
June 11th, 2019 स्वास्थ्य सुझाब0comments
एजेन्सी,जेठः मानिसको शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली (रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता) कमजोर भयो भने सामान्यदेखि जटिल रोग अर्थात जुनसुकै रोगले पनि चाँडै आक्रमण गर्छ । यसकारण हामीले आफ्नो प्रतिरक्षा शक्ति बलियो बनाउन अनिवार्य छ । शरिरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भयो भने शरिरमा हतपत कुनै पनि किटाणुले आक्रमण गर्न सक्दैन । यसकारण शरिरको प्रतिरक्षा शक्ति बलियो बनाउन यी १० प्रकारका खानेकुरा खानुपर्छ ।
लसुन संसारभरि प्रचलित मसला हो। लसुनमा जिंक तत्व हुन्छ। पहिलेका मानिसले लसुनलाई संक्रमणबाट बच्ने औषधिका रूपमा लिन्थे। यसकारण दैनिक भोजनमा लसुन समावेश गर्दा शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ।
२.पहेंंला तरकारी तथा फलफूल
रसदार फलफूलमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन ‘सी’ पाइन्छ। भिटामिन सीले फ्लु तथा चिसोको एलर्जीसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। भिटामिन सी अंगुर, सुन्तला, मौसम, कागती, जुनार, भोगटेजस्ता फलफूलमा पाइन्छ।
अदुवाले घाँटीको संक्रमण हटाउन सहयोग गर्छ। साथै शरीर सुन्निएको तथा अन्य विभिन्न रोगमा समेत यसले उत्तिकै फाइदा पु(याउँछ। यसकारण यसको नियमित सेवनले शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ।
पालुंगाको साग शरीरमा प्रतिरक्षा शक्ति बढाउन अति उपयोगी छ। कारण यसमा भिटामिन ए, सी प्रशस्त मात्रामा पाइनुका साथै ‘एन्टिअक्सिडेन्टल’ तत्व हुन्छ। यी तत्वहरूले शरिरमा प्रतिरक्षा क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग गर्छन्।
मेवामा पाइने भिटामिन सी, बी, फोलेट र पोटासियम जस्ता तत्वले शरीरको प्रतिरक्षा शक्ति बढाउँछन्। साथै पोटासियमले पाचनशक्ति बढाउनुका साथै संक्रमणविरुद्ध काम गर्छ।
बदाममा भिटामनि सी र ई पाइन्छ। यो शरीरका लागि अत्यन्त पोषक तत्व मानिन्छ। यसका साथै बदाममा पाइने तेलले शरीरलाई झरिलो पार्छ। सुकेका ४६ दाना बदामले सय प्रतिशत भिटामिनको काम पूरा गर्ने मान्यता राखिन्छ।
बेसारमा यस्तो शक्ति हुन्छ, जसले किटाणु मार्छ। यसका साथै यसमा हुने तत्वले बाथरोगका कारण हुने हड्डी टुक्रिने तथा सुन्निने समस्याबाट बचाउँछ। नियमित खानामा बेसार प्रयोग गर्दा मांशपेसी नष्ट हुन दिँदैन।
Previous article ११ महिनादेखि सुत्केरी भत्ताबाट बञ्चित
Next article गैरनाफामुलक बहुउपचार बाल अस्पताल खोल्दै डा.भगवान कोइराला
रक्सीको लत छुटाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी उपाय
पेट दुखेको छ ? पानीसँग यी कुराहरू मिसाएर पिउने गर्नुस्.....